Blog – Gandawun Shwe Bagan
ပီကင်း / ဟောင်ကောင်- မကာအို Incentive Trip (29.8.18)
ပုဂံ- ပုပ္ပါး-( စွယ်တော်လေးဆူ ) ခရီးစဉ် ( 25.08.2018/ 28.08.2018) ( 3N / 4D )
ပုဂံ(စွယ်တော်လေးဆူ)ပုပ္ပါးခရီးစဉ် ( တစ်ဦး-၉၅၀၀၀ ကျပ် )
September 7, 2018 6:48 am
ပုဂံ(စွယ်တော်လေးဆူ)ပုပ္ပါးခရီးစဉ် �တစ်ဦး-၉၅၀၀၀ ကျပ် ( Hotel + Car + အစားအသောက် အပြီး အစီး) ထွက်ခွာမည့်နေ့ရက် =August 31 / Sep7/ Sep 24(အဘထွက်ပွဲ) ပုဂံ-ညောင်ဦး-ပုပ္ပါး-( ၃ညအိပ် – ၄ ရက်) ရောက်ရှိမည့်နေရာလေးတွေကတော့—– စိမ်းလန်းစိုပြေပုပ္ပါးမြေ အညာဒေသထွက်အသုံးအဆောင်များနှင့်ဓာတ်ဖမ်းနိုင်မဲ့ အညာထန်းတဲ မြတ်စွယ်တော်လေးဆူတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သော— *ရွှေစည်းခုံစေတီ *တုရင်တောင်စေတီ *လောကနန္ဒာစေတီ *တန့်ကြည့်တောင်စေတီ ဝါတော်ကြီးမြတ်လှပါသောမဟာငှက်ပစ်တောင် နံရံဆေးရေးပန်းချီများစွာဖြင့်ပြည့်နက်နေသောစူဠာမဏိ ထုထည်ကြီးမားလှသောဓမ္မရံကြီးဘုရား မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဆံတော်မြတ်ကိန်းဝတ်ရာရွှေဆံတော် အနုပညာလက်ရာအမြောက်ဆုံးအာနန္ဒာဘုရား ညာဏ်တော်အမြင့်မားဆုံးသဗ္ဗညုဘုရား ထီးလိုမင်းလိုဘုရား အလိုတော်ပြည့်ဘုရား ဗူးဘုရား နန်းကျဘုရင်မနူဟာမင်း၏ကောင်းမှုတော်မနူဟာဘုရား မြစေတီဘုရား ကန်တော့ပလ္လင် ပုဂံမြို့ရဲ့ ညနေဆည်းဆာအလှကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် Sunset point ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ �3 Star အဆင့်ရှိ […]
ဂန္တဝင်ရွှေပုဂံ Travel & Tours ( ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ )
September 7, 2018 6:46 am
သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို ဖန်တီးရယူချင်ပါသလား…👫💑👭👩‍❤️‍💋‍👩 မိသားစုတွေနဲ့အတူ အမှတ်တရတွေကို ပုံဖော်ချင်ပါသလား…👪👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👧 အလုပ်ခွင်ထဲက အဆင်မပြေမှုတွေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို မေ့ဖျောက်လိုက်ချင်ပါသလား…🕺🕺🕺 ခရီးသွားလိုက်ပါ မိတ်ဆွေ… ဂန္တဝင်ရွှေပုဂံရဲ့ ခရီးစဉ်တွေနဲ့အတူ လိုက်ပါစီးမျောရင်း ခရီးသွားခြင်းက သင့်ကို ဘယ်လောက်ထိ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ခံစားမှုအသစ် အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လဲဆိုတာ လက်တွေ့သိရပါလိမ့်မယ်… 😍😍😍 တောင်ကြီး-အင်းလေး-ပင်းတယ-ကလော(၄ည/၅ရက်)၂၀၀၀၀၀ကျပ် အင်းလေး-ကလော (၃ည/၄ရက်) ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ပုဂံ-ညောင်ဦး-ပုပ္ပါး (၃ည/၄ရက) ၁၁၀၀၀၀ ကျပ် မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် (၃ည/၄ရက်) ၁၃၀၀၀၀ ကျပ် ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုမျာ3းStar အဆင့်ရှိ ရေကူးကန်ပါဝင်သော ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်ခွင့် Yutong (or) Higer Air-Con Bus မနက်စာ / နေ့လည်စာ […]
Rain Travel & Tours ( ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ )
September 7, 2018 6:43 am
💑💑သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာဘယ်ခရီးစဉ် တွေသွားဖို့စိတ်ကူးထားလဲ ?? 💑 💁မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကို Rain Travel က အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးမယ်ဆိုရင်ယုံမလား ?? 🙋 👪မိသားစုနဲ့အတူအမှတ်တရတွေကိုပုံဖော်ချင်ပါသလား? 💞ချစ်သူ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ လန်းချင်ပါသလား? 💥လုပ်ငန်းခွင်ထဲကအဆင်မပြေမှုမောပမ်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ကိုမေ့ဖျောက်ပြီးသဘာဝအလှတရားတွေရဲ့အလယ်မှာ လန်းဆန်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့အမှတ်တရတွေကိုပုံဖော် ဖို့သာယာပျော်ရွှင် Rain Travel ရဲ့ခရီးစဉ်တွေနဲ့အတူ လိုက်ပါစီးမျောကြည့်လိုက်ပါ 💃💃💃 💥ခရီးစဉ် ( ၁ ) 💥 💥တောင်ကြီး၊အင်းလေး၊ပင်းတယ၊ကလော(၄ည၅ရက် ) ထွက်မည့်ရက် ( 23 -10 – 2018 ) တစ်ယောက် – 170,000K 👉ရောက်ရှိမည့်နေရာလေးတွေက👈 🙏ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အသည်းနှလုံး(သို့)အင်းလေးကန် အတွင်းနေရာစုံ———* 🙏တောင်ကြီးမြို့ကျက်သရေဆောင်စူဋာမုနိဘုရား 🙏သဘာဝကျောက်စွယ်ကျောက်ခက်များနှင့်ထမ့်စမ်းဂူ 🙏ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မွေတော်ကက္ကူစေတီစုများ 🙏ပင်းတယရွှေဥမှင်လိုဏ်ဂူ 🙏ကုံလုံဆရာတော်ရုပ်ကလာပ်နှင့်စံကျောင်း 🙏မိန်းမရဲသခင်မတောင် 🙏ကလောနှီးဘုရားနှင့် မြင်းမထိသဘာဝလိုဏ်ဂူ 👉အိမ်ပြန်လက်ဆောင်များဝယ်ယူရန်ကလောဈေး👈 💥ခရီးစဉ် ( ၂ […]
September 7, 2018 6:37 am
ပီကင်း / ဟောင်ကောင်- မကာအို Incentive (29.8.18)
September 7, 2018 6:35 am
GSB’s Vietnam Trip ( 24.8.18)
ဟောင်ကောင်၊မကာအို၊ရှန်းဇန်း (၃/၄ရက်)( ၄/ ၅ရက်)( ၅ / ၆ရက်)
September 7, 2018 6:22 am
ဟောင်ကောင်၊မကာအို (၃ည/၄ရက်) DAY 1 – YANGON – Hong Kong – Macau DAY2– Macau – Hong kong DAY3– Hong Kong DAY4– Hong Kong-YANGON _______________________ ဟောင်ကောင်၊မကာအို (၄ည/၅ရက်) DAY 1 – YANGON – Hong Kong – Macau DAY2– Macau – Hong kong DAY3– Hong Kong DAY4– […]
စီအမ်၊ရှန်ဒူး ၊ Luoyang /ကျန်ကျားကျဲ့- ကွေ့လင်-ချန်ရှား/ ရှန်ဂရီလာခရီးစဉ်
September 7, 2018 6:20 am
စီအမ်၊ရှန်ဒူး ၊ Luoyang ( ၆ည/ ၇ ရက်ခရီးစဉ်) Day 1- Yangon~ Xian Day2– Xian ~ Huayin Day3– Huayin ~ Mt. Huashan ~ Luoyang Day4– Luoyang ~ Xian ~ Chengdu (High Speed train) Day5– Chengdu ~ Leshan Giant Buddha ~ Mt Emei Day6– Chengdu Departure ( Night […]